Tag: nche | Martech Zone
Anyị anaghị ekwukarị banyere ịntanetị ma ọ bụ Web Gbara Ọchịchịrị. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ mere ezigbo ọrụ nke ịchekwa netwọkụ dị n'ime ha, ịrụ ọrụ site n'ụlọ emepeela ụlọ ọrụ maka egwu ndị ọzọ nke ịbanye na hacking. 20% nke ụlọ ọrụ kwuru na ha chere nsogbu nchebe n'ihi onye ọrụ dịpụrụ adịpụ. Uringnagide n'ụlọ: Mmetụta COVID-19 na nchekwa azụmaahịa abụghị ọrụ CTO abụghị naanị. Ebe ọ bụ na ntụkwasị obi bụ ego kachasị ọnụ ahịa na
Etu esi ebipụta ndepụta pọdkastị a kwadoro na mpụga dị ka faili ntanetịime n'ime usoro WordPress gị.